आत्मघाती सोच, दुर्गतिको बाटो – ध्रुवहरि अधिकारी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:४० English
आत्मघाती सोच, दुर्गतिको बाटो – ध्रुवहरि अधिकारी
माओवादी बाचा : २०५२ सालमा माओवादी विद्रोहका थालनी गराउनुअगावैदेखि प्रचण्ड र बाबुरामहरूको यस्तो सार्वजनिक बाचा थियो : – हाम्रो हातमा शासन–सत्ता आएपछि नेपाललाई अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा रहन दिने छैनौं। अर्थात् ‘पूर्ण’ उपनिवेशमा परिणत गराइदिनेछौं। र, यो बाचा पूरा गर्न २०६३ साल बैशाखयता उहाँहरूले कहिले एक्लै र कहिले कांग्रेस, एमाले र मधेसीहरूको मिलोमतोमा दिलोज्यानले एकपछि अर्को उपाय अपनाउँदै लाग्दै आउनु भएको छ। विद्रोहकालका दशवर्षमा आठवर्ष भारतमा बिताएको कबुल उहाँहरू आफैंले गर्नुभएको छ। त्यसअवधिमा पाएका तालीम, सहायता र प्रोत्साहनबापत अहिले गुन तिर्न अघिसर्नु अपराध पनि होइन। मूर्ख त नेपालका लाटा–सोझा जनसाधारण हुन् जसले अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थ्ा रहन दिन्नौं भनेको कुराको आशय व्यवहारतः स्वतन्त्र गराउने बाचाको रूपमा बुझ्न पुगे। भारतको थिचोमिचो कम हुँदै जाने आशा गरे।
वीरगञ्जको मेहता प्रकरणले दिल्लीलाई, दिल्ली रिझाउन रातोदिन खट्ने माओवादीसमेतका नेताहरूलाई र मधेसीको नाममा राजनीति गर्न अह्राइएका अनुचरहरूलाई अनुकूल अवसर उपलब्ध गराइदिएको छ। विरोध जनाउने निहँुमा प्रचण्डले राजदूत जयन्तप्रसादलाई खुलारूपमा आफ्नो निवासमा डाकेर ‘भूलसुधार’ गर्ने मौका पाउनुभयो। गोप्य बैठकमा डाकेकोमा सार्वजनिक आलोचना खेप्नुपरेको घटना पुरानो होइन। अर्को पनि फाइदा भयो शीर्षस्थ माओवादी नेतालाई : जातीय राज्य बाँड्ने माओवादी नीतिविरुद्ध अभियान चलाउन खोज्नेहरूको विरुद्ध प्रतिकारमा ओर्लिन प्रचण्डले गरेको खतरनाक आह्वानको विरोधलाई राष्ट्रियताको चिन्ता झल्किने काम गरेको देखाएर निष्कृय तुल्याउन पाइयो। अर्थात् एक ढुङ्गाले दुई चराको शिकार गर्न पाइयो। ‘मधेसी’ को नारा दिई राजनीति गर्न पल्केकाहरू तराईका नेपालीबीच अब सस्ता नारा नबिक्ने यथार्थलाई ठम्याइसकेका थिए। त्यस्तो बेलामा महावाणिज्य दूतावासका कर्मचारी एस्.डी. मेहता प्रकरणले नारा, आन्दोलन गर्नु नपर्ने अवसर जुटाइदियो। अर्थात् नाङ्गो हुन लागेको तिनको शरीरलाई मेहताको कथनले लाज ढाक्ने टालो झुन्डाइदियो। अब भन्न पाउने भए तराईको नाममा फाइदाको राजनीति चलाउने बानी परेकाहरूले–मेहताको विवादास्पद भनाइपछि तराई–केन्द्रित आन्दोलन भारतीय उक्साहटमा भएको देखिने भयो, त्यस्तो आन्दोलनमा कसरी लाग्नु! भनिन्छ, नकच्चरोपनको ओखती छैन।
दिल्ली त सदाकाल फाइदामा छँदैछ, चर्चा अथवा विवादका प्रसङ्ग जे आए पनि तिनले नेपालमा भारतको हैकम प्रमाणित गर्ने हो, गरिहाल्छ। यहाँका निजामती, जङ्गी सबै फाँटका मानिस छिमेकी रिझाउन सदा–सर्वदा तत्पर देखिन्छन्।
शासक, प्रशासक सबै नाफामा, देश मात्र हो घाटामा परेको। बेवारिसे अर्थात् वारेस नभएको अवस्थाको। कथम् त्यसो नहुँदो हो त यसलाई टुक्रा–लाम्टामा चोक्ट्याउन जातिगत समूह र उप–समूहहरू सल्बल्याउने थिएनन्। सिक्कमलाई झैं एक गाँसमा निल्न नसकिने देखेर राज्य राज्यका नामा टुक्रिन दिई पछि आफूमा समाहित गराउने भारतीय प्रपञ्चलाई बल पुर्याूउने काम गर्न अग्रसर हुने थिएनन्। फाली मासेर करुवा भनेझैं देश टुत्र््कयाएर प्रदेश बनाउने आत्मघाती रहरको सोच समूह र समुदायमा विभक्त मानिसमा आउने थिएन। यहीँछेउ आइपुग्दा कवि भूपी शेरचनको चर्चित कविताको सन्देश सम्झना हुन्छ : हामी वीर छौं तर बुद्धू छौं। अहिलेको जनजाति परिभाषामा कवि शेरचनलाई थकाली भनेर त्यसैभित्र पारिन्थ्यो होला। तर विडम्बना छ, थकालीका पनि थकालीहरू समेत कवि भूपीको सन्देश बुझेर बुद्धू हुने बाटो छोड्ने अर्तिसमेत मान्दैनन्। देशै नरहे प्रदेशको के अर्थ रहला, ठम्याउन चाहँदैनन्। देशलाई बर्बादीतिर लगेर प्रदेश कसरी सुरक्षित र सम्पन्न रहला, त्यसबारे घोत्लिने धैर्य तिनमा छैन।
हुने हुनामी कसले टार्ने? ‘भाइ फूटे गवाँर लुटे’ भन्ने आहान छ।
१२ जेष्ठ २०६९, शुक्रबार १९:५० मा प्रकाशित